ရေအပူစုပ်စက် r407 မှ Air ကို China Manufacturer
Guangdong Shunde O.S.B. Environmental Technology CO.,LTD. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Africa , Asia , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Other Markets , West Europe ထုတ်ကုန်:91% - 100% Cert:ISO9001, CB, CCC, CE, EMC, SSA ဖေါ်ပြချက်:Chiller အပူ Pump ရေအပူပေးစက်,အိမ်ရေများအတွက် Air ကိုရင်းမြစ် Pump,ရေအပူ Pump R407 မှ Air ကို
Home > ထုတ်ကုန်များ > Air ကိုရင်းမြစ်အပူ Pump ရေအပူပေးစက် > ရေအပူစုပ် Air လေကြောင်းလိုင်း > ရေအပူစုပ်စက် r407 မှ Air ကို
ရေအပူစုပ်စက် r407 မှ Air ကို
လက်မှတ်: ISO 9001:2018
HS Code ကို: 8418612090
ရေ chiller အပူစုပ်စက်ရေပူစက်မှ BB35-315T / P ကိုဘက်စုံ fuction လေကြောင်းရန်
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကြွယ်ဝအတွေ့အကြုံကိုအတူ 1999 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးရေအပူစုပ်စက်ထုတ်ကုန်လေကြောင်းတင်ပို့ခဲ့သည့်ဂွမ်ဒေါင်း Shenbao လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာ CO ။ , LTD ၏ဆန်းသစ်ဆက်လက်အဖြစ်။ OSB အီးန်ဆောင်မှုများအမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဈေးကွက်ထဲမှာရရှိနိုင်အရှိဆုံးတောင်းဆိုမှုများထုတ်ကုန် Providence ထံအပ်နှံ, 2014 တွင်မွေးဖွားခဲ့ကြ။
ယခုကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သော 4-In-1 electrici ty ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစစ်ဆေးရေးစက်အဖြစ်,3အော်တိုထုတ်လုပ်မှုလိုင်းနှင့်အတူအပြည့်အဝရေခဲသေတ္တာ Auto-refilling စက်အဖြစ်အားလုံးလိုအပ်သောစမ်းသပ်ကိရိယာများ3အအေး / ပူအခွအေနေ enthalpy စမ်းသပ်ခြင်းဓာတ်ခွဲခန်းတပ်ဆင်ထားကြမှတက်နှင့် 2008 system ကို: စတာတွေအားလုံးစီမံခန့်ခွဲမှုယန္တရားကိုစစ်ဆေးနေဟေလိုဂျင်ယိုစိမ့်က ISO 9001 တွင်အောက်ပါတို့ကကွပ်မျက်နေကြသည်။
ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်နှင့်ဥရောပ, တောင်အာဖရိကနှင့်အာရှမှထောက်ပံ့ခဲ့ကြအပူစုပ်စက်ထုတ်ကုန်ကောင်းစွာစျေးကွက်ကလက်ခံကြသည်ကျနော်တို့ EN 14511 ဖြတ်သန်း, EN16147, EN14825 စသည်တို့စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကိုစမ်းသပ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိမိကိုယ်ကိုတီထွင် IOT wifi အားဖြင့်ပိုပြီးအောင်မြင်မှုအောင်မြင်ပါပြီ ရေအပူစုပ်စက်ထုတ်ကုန်အားလုံးနီးပါးကျွန်တော်တို့ရဲ့လေထု၏ထဲမှာသက်ဆိုင်သောထိန်းချုပ်မှု function ကို။
ကြှနျုပျတို့ဂျွန်ကျွန်တော်တို့ကိုသငျသညျကြိုဆိုပါတယ်နှင့်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူမိတ်ဖက်ဖြစ်, တီထွင်, ယှဉ်ပြိုင်!
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : Air ကိုရင်းမြစ်အပူ Pump ရေအပူပေးစက် > ရေအပူစုပ် Air လေကြောင်းလိုင်း
အပူအအေးအပူ Pump လျှပ်စစ်အပူရေကန် Pump
ကြမ်းပြင်အောက်ရှိ Super Quiet အင်ဗာတာအပူပေးစက်
Air ကိုရင်းမြစ်အပူ Pump ရေအပူပေးစက် 60C
ရေအပူ Pump ရေအပူပေးစက်မှအများဆုံးထုတ်လုပ်အား 100kW Air လေကြောင်းလိုင်း
စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသိမ်းဆည်းခြင်းနဲ့ Big Air ကိုရင်းမြစ်အပူ Pump
စက်မှုအပူအပူ Pump အများဆုံးထုတ်လုပ်အား 100kW
ရေ Space ကိုအပူအပူစုပ်စက်ရန် 83kw Air လေကြောင်းလိုင်း
Chiller အပူ Pump ရေအပူပေးစက်
အိမ်ရေများအတွက် Air ကိုရင်းမြစ် Pump
ရေအပူ Pump R407 မှ Air ကို
Chiller အပူ Pump ရေအပူပေးစက် အိမ်ရေများအတွက် Air ကိုရင်းမြစ် Pump ရေအပူ Pump R407 မှ Air ကို
မူပိုင်ခွင့်© 2020 Guangdong Shunde O.S.B. Environmental Technology CO.,LTD. All rights reserved ။